Raw Testosteron-vous Enanthate powder Manufacturing & Mpanamboatra - Pabrika
Ny testosterone enanthate dia sokajiana ho toy ny AAS satria izy io dia samy manana ny endriky ny testosterone sy testosterone pro-zava-mahadomelina, midika izany fa manentana ny vatana hamokatra testosterone amin'ny tenany manokana. Amin'io voalaza io, dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny endrona ary ny fiantraikany amin'ny anabolinina.
Vao maina ny vidin'ny Testosteron Enanthate (315-37-7)
Rano Testosterone volo volo (315-37-7) Description
Ny vovoantitra testosteron Enanthate roapolo, amidy eo ambanin'ny marika Delatestryl miaraka amin'ny hafa, dia fanafody androgen sy anabolic (AAS) fanafody izay ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ny halatra testosterone ambany amin'ny lehilahy, ary koa mitaky ny fahamaotiana amin'ny ankizilahy, ary ny homamiadana amin'ny vehivavy . Mampiasaina amin'ny fitsaboana hormonina ho an'ireo lehilahy mpandika lalàna koa izy io. Matetika izy no ateraky ny fitsaboana indraindray, isaky ny roa hatramin'ny efatra herinandro.
Ankoatra ny fampiasana ara-pahasalamana, ny poezia Testosterone Enanthate dia ampiasaina hanatsarana ny vatana sy ny fahombiazana. Ny zava-mahadomelina dia fitaovana enti-matavy any amin'ny firenena maro ary noho izany dia tsy ara-dalàna ny fampiasana tsy ara-pahasalamana.
Rojo fanenan-tsavona Testosteron Enanthate (315-37-7) Specifications
Product Name Orinasa mpanentana testosterone rongony
Anarana simika Testosterone heptanoate; Testosterone enantate; Testosterone heptylate; Androtardyl
Drug Class androgen sy anabolic steroid, Androgen ester
molekiolan'ny Formula C21H28O3
molekiolan'ny Wvalo 400.59
mitsonika Point 34-39 ℃
Ny antsasaky ny biolojia Ny famonoana ny antsasaky ny fiainana dia (Intramuscular) 4-5 andro
Solubility Tsy voapoizina anaty rano
fampiharana Andry. bodybuilding
Inona no atao hoe vovobon-tsolosaina rongon'ny testosteron (315-37-7)?
Ny fitsaboana testosterone enanthate dia tandindomin'ny zava-mahadomelina androgen, ary io dia singa mampiavaka ny testosterone proprionate sy testosterone enanthé .Onepostone enanthate enanthate izay fantatra ihany koa ho testosterone heptanoate, dia anabolic ary androgenic steroid (AAS) fanafody ampiasaina amin'ny fitiliana ambany ny testosterone ambany. Ny fanafody anaabolika dia miasa amin'ny fananganana hozatra, raha ny androgenic kosa dia manondro ny fampivoarana ny toetra maha lahy na lahy na vavy.
Ahoana no miasa ny vovoantom-pihetseham-po (315-37-7)
Ny steroid testosterone enanthate dia andro firaisana ara-nofo sy steroid anabolic izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny testosterone ambany ambany. Ny dikany dia ny azo ampiasaina amin'ny fanorenana hozatra sy ny fitomboan'ny lahy sy ny vavy. Izany dia atao amin'ny alalan'ny fanoloana ny Testosterone izay mety ho ambany ao amin'ny vatana.
Betsaka ny bodybuilders ankehitriny mampiasa ny vovo-tsiranoka testosterone amin'ny fanalefahana ny fanarenana, ny fofona ary ny fanorenana hozatra. Ny mahatonga azy ho malaza dia ny fahombiazany ho an'ireo mampiasa azy io dia mitondra azy manokana na mampiditra izany ao anatin'ny fandefasana steroid.
Rojo fanenomana testosterone (315-37-7) Dosage
Ny testosterone enanthate dia dipoavatra marevaka na mavokely mivoaka amin'ny milina XLM (mL) ampiasaina amin'ny fampiasana glasy. Voasarika izy intramuscularly ho any amin'ny akanjony isaky ny faran'ny herinandro. Mba hisorohana ny haavon'ny hafanan'ny hafanana (sy ny fiheveran'ny fihetseham-po tafahoatra), dia matetika no asiana dossier ambany kokoa mandritra ny fotoana fohy.
Ny zava-mahadomelina, izay mihantona amin'ny menaka sesame, dia maharitra roa na telo herinandro. Ny dosage dia mety samihafa amin'ny isam-batan'olona, ​​saingy amin'ny ankapobeny dia aseho toy izao manaraka izao:
Gripona lehilahy: 50 na 400 milligrams (mg) isaky ny roa ka hatramin'ny efatra herinandro
Ny fahanteran'ny lahy dia: 5 hatramin'ny 200 mg isaky ny roa ka hatramin'ny efatra herinandro mandritra ny efatra hatramin'ny enim-bolana
Kanseran'ny nono: 200 hatramin'ny 400 mg isaky ny roa hatramin'ny efatra herinandro
Ny fitsaboana hormone transgender: 50 na 200 mg isan-kerinandro na 100 na 200 mg isaky ny roa herinandro
Ny vovoantom-pihetsifetsena rongony (315-37-7) dia ampiasaina
Ny voka-dratsin'ny testosterone enanthate dia mitovy amin'ny an'ny testosterone acetate, izay ahitana ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny taovan'ny lahy sy ny taovam-pananahana ary ny fanoherana ny estrogen. Ny poezia testosterone enanthate koa dia manana proteine ​​manaitaitra ny vokatra, izay mamela azy io hanampy ny fitomboan'ny taovam-pisefoana sy ny fahazoana mavesatra. Ny vesatry ny testosterone enanthate dia afaka manakana ny fihanaky ny gripa ary manasitrana ny tsiambaratelo ara-pahasalamana ara-pananahana, ka mihena ny testosteron endogenous miafina ao amin'ny sela Leydig, izay mahatratra ny tanjon'ny fampiatoana spermatogenesis.
Ny vovo-dronono ho an'ny testosterone dia azo ampiasaina ho lahy sy vavy mandritra ny fotoana maharitra. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fihanihan'ny lahy sy ny vavy ary ny tsy fahasalamana gonadal, ny hypogenese ny taovam-pananahana, ny aretina, ny ionoka ary ny cryptorchidism. Azo ampiasaina ihany koa izy io mba hanasitranana ny fanalàn-tsakafo amin'ny vehivavy, ny aretina menopausal, ny homamiadana ary ny homamiadan'ny tranon-jaza. Azo atao ihany koa ny manandrana cirrhosis, anemia mangidy, osteoporose sy aretina hafa mandoza.
Mividiana vovoka testosterone Enanthate avy amin'ny Buyaas.com
Ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana test
Testosterone: Fampihorohoroana-fanitsakitsahana - Fanovana, natontan'i Eberhard Njeschlag, Hermann M. Behre, pejy 417, 533-560
Williams Textbook of Endocrinology E-Book, Shlomo Melmed, Kenneth P. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, Page 759-780
Anabolic-Androgenic Steroids, natontan'i Charles D. Kochakian, pejy 46-60
Rano testosteron Decanoate vovoka (5721-91-5)